What was great Zimbabwe and what were its primary sources of wealth? - African stories
How was Great Zimbabwe built?
Was Great Zimbabwe Bantu?
Did the Rozvi people build Great Zimbabwe?
IMPORTANT: How do I get a Mauritius work access permit?
“The Mutapa rulers continued the tradition of building structures in stone, similar to Great Zimbabwe, although considerably smaller in size. … The other Rozvi groups dispersed over most of the Zimbabwe Plateau.